CookieTV အကြောင်း - Watch TV Shows, Videos Online with Cookie TV
Cookie TV ဆိုတာ တိုက်ရိုက် TV အစီအစဉ်များနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများကို အချိန်မရွေး
နေရာမရွေးကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ မိုဘိုင်း TV ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာအခက်အခဲမှမရှိ ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ရိုးရှင်းတဲ့ TV တစ်ခုပါပဲ။
မဆုံးနိုင်တဲ့ ကြော်ငြာတွေနှင့် အခမဲ့ရုပ်သံလိုင်းတွေနှင့် အိမ်ကတီဗွီအဟောင်းကြီးကို ဘေးချိတ်ထားပြီး၊ လွယ်ကူစွာအသုံးပြုလို့ရမယ့် Cookie TV ကိုခံစားကြည့်လိုက်ပါ
မုန်းဖို့ကောင်းတဲ့ ကြော်ငြာတွေလဲမပါ၊ တစ်နှစ်စာ စာချုပ်လဲချုပ်စရာမလို၊ ပစ္စည်းငှာရမ်းခလဲမပါ၊ အခြားမလိုအပ်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်တွေပေးစရာမလိုတဲ့ Cookie TV
Cookie TV အနေနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဦးဆုံး “Catch-up” ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ဒီနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ တိုက်ရိုက်ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို လွတ်သွားခဲ့လျှင် တစ်ပတ်အတွင်း အချိန်သင့်စိတ်ကြိုက်လိုသလို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ခြင်းမရွေး၊ နေရာမရွေး ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့၊ Cookie TV မှရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို ဝယ်ယူထားသူတိုင်း ဒီအစီအစဉ်ကို “အခမဲ့” ခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ သတင်းတွေနှင့် သင့်ရဲ့ တနေ့တာကိုစတင်ချင်ပါသလား ဒါမှမဟုတ် တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်းတွေမှာပြသနေတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို မလွတ်တမ်းကြည့်ချင်ပါသလား?
သင့်ဖုန်းပေါ်ကရုပ်သံလိုင်းတွေကို သင့်စိတ်ကြိုက်ထားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံး တိုက်ရိုက်ရုပ်သံလိုင်းတွေကို အလွယ်တကူပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း စိတ်ကြိုက်ပြန်လည်စီစဉ်ပြီး ကြည့်လို့ရပါတယ်။
ဟောလိဝုဒ်မှ နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာမည့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကို အမြန်ဆုံးကြည့်ရှုနိုင်မည့် နည်းလမ်း
နောက်ဆုံးထွက် ဟောလိဝုဒ် ရုပ်ရှင်ကားများကို HD အရည်အသွေးဖြင့် အင်္ဂလိပ် နှင့် မြန်မာစာတန်ထိုး နှစ်မျိုးလုံးနှင့်ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။ တစ်နှစ်လောက်အထိစောင့်စရာမလိုဘဲ အရည်အသွေးပြည့် ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုကြည့်နိုင်မှာပါ။
ဇာတ်လမ်းတွေကိုကြည့်ဖို့အတွက် ရွေးရခက်နေပါသလား၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးအဖွဲ့က ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားတွေနှင့် အလန်စားဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေနှင့် တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကိုကြည့်ဖို့ သူငယ်ချင်းကအကြံပေးသွားတဲ့ရုပ်ရှင်နာမည်ကိုမေ့နေပါသလား? ကိစ္စမရှိပါဘူး! သရုပ်ဆောင်နာမည်၊ ဇာတ်လမ်းအမျိုးအစား၊ အကြောင်းအရာ ဒါမှမဟုတ် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအနည်းငယ်သိရုံနှင့် ရှာဖွေလို့ရပါတယ်
Download အရင်လုပ်ထားပြီး နောက်မှကြည့်လို့ရပါတယ်
သင့်ရဲ့ မိုဘိုင်းဒေတာတွေအရမ်းကုန်သွားမှာ မစိုးရိမ်ပါနှင့်။ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို WiFi နှင့် ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားပြီး အင်တာနက်မရှိတဲ့အချိန်တွေမှာ Offline ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ကဲ အသုံးစရိတ်တွေချွေတာလို့ရတာပေါ့။
ဇာတ်ကားများကို လက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရယူလိုက်ပါ
သင့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနှင့် သူငယ်ချင်းများကို “Cookies” လေးတွေသာမက ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများကိုလဲ လက်ဆောင်ပေးပို့လို့ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ချစ်ခင်သူများကို အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကို ဝေမျှပေးတာထက် ဘယ်အရာမှအရေးမကြီးပါဘူး။ “Movie Detail Page” မှ “Gift” ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာလူကို လက်ဆောင်ပေးလို့ရပါတယ်။
အခုဆိုရင်တော့ သင်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့လူနှင့် သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်လမ်းအကြောင်းလေးတွေ ပြောလို့ရပြီးပေါ့။ ကဲ ဘယ်လောက်တောင် စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ ကောင်းသလဲ။
Cookies ဆိုတာ Cookie TV တစ်ခုထဲမှာပဲ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Cookies တွေက ပုံမှန်ကြေးသွင်းထားတဲ့တီဗွီအစီအစဉ်တွေနဲ့ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို သင့်ဆီအရောက်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ Cookie TV ရဲ့အကောင်းဆုံးအရသာကိုခံစားနိုင်ဖို့ အရင်ဆုံး Cookies တွေဝယ်ယူဖို့လိုပါမယ်။ ဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲဆိုတာကတော့… Cookie တစ် ခု ကို မြန်မာ ငွေ တစ်ကျပ် နှင့် ညီမျှပါတယ်။
သင့်ရဲ့ Cookie ခရားကို ဖြည့်ထားပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ သင့်ရဲ့လှပတဲ့ Cookie ခရားကိုဖြည့်တင်းထားဖို့လိုပါတယ်။သင့်အတွက် သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတဲ့ ငွေပေးချေမှုပုံစံမျိုးစုံကို ကျွန်တော်တို့ဘက်က စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။နောက်ပြီး အခါအားလျော်စွာ Cookies များအခမဲ့ရရှိနိုင်မယ့် အစီအစဉ်တွေပါ ထည့်သွင်းထားတာကြောင့် ဒီအခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံဖို့အကြံပြုပါရစေ။
Cookies များ လက်ဆောင်ပေးရခြင်းရဲ့ အရသာ
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ Cookies တွေပို့ပေးလို့ရသလို မိတ်ဆွေနဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆီက ပို့လာတဲ့ Cookies တွေကိုလည်း ပြန်လည်လက်ခံရယူနိုင်ပါတယ်။သင့်ရဲ့ Cookie အကောင့်က Gift ဆိုတဲ့ နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီး ကံကောင်းသူတစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်လိုက်ရုံပါပဲ။အသုံးပြုပုံကအဲဒီလောက်ရိုးရှင်းပါတယ်။ Cookie တစ်ခုဟာ မြန်မာငွေတစ်ကျပ်နှင့် ညီမျှပါတယ်။
အားကစား၊ ဖျော်ဖြေရေး၊ သတင်းနဲ့ ကလေးအစီအစဉ်များပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Catch-up ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုက်တာနဲ့ လွတ်သွားတဲ့ TV အစီအစဉ်များကို အချိန်မရွေး နေရာမရွေးပြန်ကြည့်လို့ရပါပြီ။
4,900 14,700 12,900 Save 12% 29,400 23,500 Save 20% 58,100 43,500 Save 25%
၃၀ ရက် 4,900
၉၀ ရက် 14,700 12,900
၁၈၀ ရက် 29,400 23,500
၃၆၀ ရက် 58,100 43,500
Yoe Shinn Channels
ဒီအလန်းစား package မှာတော့ HBO ရဲ့ premium channel များနဲ့ အခြားစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်ကောင်းများကို သင့်တင့်သောဈေးနှုန်းဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
7,900 23,700 20,800 Save 12% 47,400 37,900 Save 20% 94,800 71,100 Save 25%
၃၀ ရက် 7,900
၉၀ ရက် 23,700 20,800
၁၈၀ ရက် 47,400 37,900
၃၆၀ ရက် 94,800 71,100
Hti Sha Channels
လစဉ်ကြေးပေးသွင်းပြီး ဟောလိဝုဒ်ရဲ့အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်များကို အကန့်အသတ်မဲ့ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် Plan ဖြစ်ပါတယ်။ Movie plan တစ်မျိုးတည်း ဒါမှမဟုတ် TV plan များနှင့်လည်း တွဲဖက်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။